Zvikumbiro zveiyo iPhone | IPhone Nhau (Peji 5)
Iyo yepamusoro delta redispligue yadzoka muFortnite ine yekushandisa kadhi
Mavhiki akati wandei mushure mekuchengetwa muEpic Games imba yekuchengetera, kuiswazve kweiyo hang glider inowanikwa zvakare asi iine huwandu hwekukanganisa.
Chii chatingaite neTVK-inoenderana TVs
Mugore rese rino mhando itsva dzeterevhizheni dzinoenderana neAirPlay 2 uye HomeKit ichavhurwa. Muchikamu chino tinokuratidza zvatichakwanisa kuita nekuenderana uku
Adobe Lightroom CC inowedzera rutsigiro rwekushandisa kwePfupi
Iyo ichangoburwa app iyo yakagadziridzwa kuti iwirirane neiyo iOS 12 Shortcuts app iAdobe Lightroom inowedzera ine inobudirira kwazvo ficha.
Plex inoda kuwana musika nekupa mafirimu uye akateedzana nezviziviso zvemidziyo yedu
Ivo vakomana vePlex vangave vachifunga zvekushandura mushambadziro wevhidhiyo wekuparura nekutanga mafirimu uye nhepfenyuro yemahara nekushambadzira.
Kenwood Inotangisa Mutsva Mutsva weWireless CarPlay Zvishandiso
Mugadziri Kenwood akapa kuCES 2019 7 zvishandiso nyowani zvinoenderana neCarPlay zvisina waya.
Nintendo yakagadzira $ 348 mamirioni mu2018 kuburikidza nemitambo yayo yenhare
Iyo vhidhiyo mutambo hofori Nintendo yagadzira 348 mamirioni emadhora kuburikidza nemitambo yayo papuratifomu mapuratifomu.
AutoSleep inotangisa dhizaini nyowani uye kuenderana neSiri Mapfupi
Iyo nyowani AutoSleep inogadziridza inounza yakawanda yakawanda maficha, senge kugadzirisa patsva kweiyo interface kana iyo "Hutsanana" uye "Kurara Bhangi" mabasa.
Pandora inotangisa yayo app yeApple Watch ichibvumira kurodha nziyo
Vagadziri veiyo mimhanzi yekushambadzira sevhisi Pandora inovandudza yavo app neine vhezheni nyowani yeApple Watch ine offline playback mode
Apple pane tambo inoenderera ichiputsa zvinyorwa: iyo App Store yakaburitsa $ 322 mamirioni mugore idzva
Mushure memashoko akaipa pamusika wemasheya wevakomana veCupertino, vakazivisa kuti mazuva eKisimusi neGore Nyowani akatyora mareti muApp Store.
Music Music muKuongorora, pfupiso yeako Apple Music chiitiko muna 2018
Alex Santarelli akaburitsa Music Music muKuongorora, chirongwa chinopa vanyoreri veApple Music kugona kuve nepfupiso yechiitiko.
Iwo akanakisa iOS maapps a2018
Isu tinopedzisa gore nesarudzo yeakanakisa maficha a2018 atinogona kuisa pane yedu iPhone, iPad, uye Apple Watch.
Netflix haichabvumidze kubatira basa rayo kuburikidza nekushandisa kweIOS
Mwedzi mishoma yapfuura, isu takatsigira kufamba kwaiitwa neNetflix kwaive kwakabatana nekunyoreswa ...
Epic Mitambo ingadai yakagadzira $ 3.000 bhiriyoni mu2018 nekuda kweFortnite
Epic Mitambo, nekutenda kuFortnite, wave muchina muhombe wekugadzira mari uye wawakawana anopfuura mamirioni mazana matatu emadhora emubatsiro mu3.000.
Alto's Adventure uye Alto's Odyssey inowanikwa ma0,49 euros chete
Snowman, mugadziri weAlto's Adventure uye Odyssey, adzikisira mutengo wemitambo yese iyi kungori ma0,49 euros, chipo chatisingakwanise kupotsa.
Yakanakisa mitambo yeIOS muna 2018
Mugore rose ra2018, mimwe mitambo mitsva yasvika paApp Store. Muchikamu chino tinokuratidza iyo yave iri mitambo yakanakisa yasvika kuApp Store muna 2018
Civilization VI inopa nzvimbo uye budiriro yeKisimusi
Kwemazuva mashoma, ivo Vagadziri VVagadziri vanoita mamiriro akasiyana uye budiriro kuti zviwanikwe kwatiri mahara zvachose.
Aya ndiwo mashanu akanyanya kuwedzerwa echokwadi mitambo paApp Store
Iwe une iOS kifaa here? Iwe unoda here kunakidzwa neakanakisa augmented chaiyo mitambo? Iyi ndiyo mitambo mishanu yakanakisa yekunakidzwa.
Zuva rakakosha kwazvo mukati mekambani yeWaze: Tim Cook Day
Vakomana paWaze vanosimbisa kuti izuva ripi rakakosha mukambani: zuva raTim Cook, iro zuva iro Apple akaziva matambudziko eApple Mepu.
PlayStation inotangisa inoshamisa Lemmings yeIOS mahara
PlayStation inoshamisika uye inotangisa iyo inoshamisa Lemmings mutambo weedu iPhone ne iPad. Mutambo watinogona kunakidzwa mukubwinya kwawo kwese mahara.
Makarenda 5 kuitira kana akagadziridzwa kuti aenderane neApple Watch
Iyo kalendari maneja Makarenda 5 achangogamuchira imwe yeyakagadziridzwa ayo vazhinji vashandisi vaitarisira: kuenderana neApple Watch uye Siri Shortcuts.
Iyo yepamutemo Fortnite yekutengesa chitoro inovhura mikova yayo
Epic Mitambo ichangobva kuvhura yepamutemo Fortnite chitoro, kwatinogona kuwana zvipfeko zvepamutemo zvegore rino zvakakosha mutambo wevhidhiyo.
Facebook yaizove ichigadzirira yayo cryptocurrency kuishandisa kuburikidza neWhatsApp
Zvinoenderana ne data kubva kuBloomberg, vakomana vepaFacebook vari kufunga nezvekutanga yavo cryptocurrency kuti ishandiswe paWhatsApp yemicropayments.
Sphero anomira kugadzira iyo BB-8 uye R2-D2 pakupera kwechibvumirano naDisney
Mugadziri Sphero, achangobva kuzivisa kuti mubatanidzwa neDisney wapera uye warega kutengesa zvigadzirwa zvaakatipa kwemakore akati wandei.
Twitter pakupedzisira inotibvumidza kurongedza maTweets zvichiteerana. Tinokuratidza maitiro ekuzviita
Twitter ichangoburitsa bhatani nyowani mukushandisa kweTwitter kweIOS iyo inotibvumidza kurongedza zviri nyore maTweets zvichiteerana.
PES 2019 inowedzera gumi nemaviri marigi uye inoshandisa iyo Unreal Injini 12 injini injini
Mutambo wenhabvu PES 2019 wave kuwanikwa nekuwedzera gumi nemaviri marigi uye kushandisa Epic Games 'Unreal Injini injini injini.
Iyo PUBG yakamirirwa kwenguva refu yakapihwa nemepu itsva yechando, Vikendi, yave kuwanikwa, kunyangwe mepu yacho isingawanikwe kwemamwe mazuva maviri.
Mushure mekutengwa kwekambani nevarume kubva kuCupertino, Apple inosarudza kubvisa kushambadza kwese kubva kuShazam app mune ayo ese mavhezheni.
Kuwedzera bhukumaki kuGoogle Chrome browser kubva kuSafari maitiro ari nyore kwazvo atinonyora pazasi uye anotibvumira kuchengetedza nguva.
Munyaya ino tinokuratidza maitiro atingawedzera katsamba kuManyorerwo ekushandisa kubva pakiyi skrini ye iPhone yedu kana iPad
Chii chinoitika miniti yega yega muApp Store?
Apple yakaburitsa nhasi muchikamu chayo "Nhasi" cheiyo App Store chinyorwa chinonakidza nezve zvinoitika mu ...
Apple inobvisa iyo Batanidza basa revatambi mukati meApple Music
Iyo pasocial network iyo Apple yakaita kuti iwanikwe kune maartist kuburikidza neApple Music, Connect, haichawanikwe uye zvese zvirimo zvakaburitswa parizvino zvichabviswa musi waMay 24, 2019.
MacTracker inogadziridzwa nekuwedzera yazvino iPhone uye iPad ye2018
Iyo Mactracker kunyorera kwave kungovandudzwa kuwedzera zvese zvitsva zvigadzirwa izvo Cupertino-based kambani yakaburitsa kumusika.
Kisimusi yauya kumutambo Chikomo Chekukwira Mujaho 2
PlayStation App inovandudzwa neyakagadzirirwa zvinopihwa
Isu takagamuchira nyowani nyowani kune iyo PlayStation App iyo, pakati pezvimwe zvinhu, ichatibvumidza isu kumisikidza zvakasarudzika zvipo zvekudzidzisa kwedu.
Algoriddim inotangisa iyo Djay nyowani yeIOS kuve yakasununguka nepro modhi yekubhadhara
Ivo vakomana veAlgoriddim vanochinja bhizinesi modhi yaDjay nekuiita yemahara pasina kudzikamisa mashandiro ayo zvakanyanya, hongu, kune zvakare yakabhadharwa pro vhezheni.
Asphalt 9 yatotibvumidza kutamba pa60 fps neiyo iPhone XS uye iPhone XR
Iyo yazvino yekuvandudza yeAsphalt 9, inotipa isu seyakanyanya ruzivo mukana wekunakidzwa nemutambo pa60 fps
Iyo yazvino yekuvandudza kubva kuGiphy inosangana neiyo TrueDepth kamera kuti igadzire tsika stickers uye inowedzera iyo keyboard zvakare
Iyo Giphy app yeIOS ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera kutsigirwa kwekhibhodi muIOS 12 uye kusangana pamwe neRechokwadi Kudzika kamera yePhones dzinoenderana.
Coommand & Kunda Vanokwikwidza, zano uye kurwisa kuti unakirwe paIOS
Coomand & Kunda Vanokwikwidza, mutambo wevhidhiyo watinogona kukudziridza hunyanzvi hwedu padanho rehunyanzvi neiyo nyowani vhezheni yechinyakare.
Google Lens zviri pamutemo inogara pane iOS
Uku kugona kunodaidzwa kuti Google Lens kwanga kusingawanikwe paIOS kusvikira zvino, iyo yakaburitswa kuburikidza nekushandisa kwayo kwepamutemo.
Epic Mitambo inobvisa iyo Infinity Blade trilogy kubva kuApp Store
Epic Mitambo yabuda muchitoro cheApple, iyo Infinity Blade nhepfenyuro, nekuti haigone kukupa iwe rutsigiro rwainoti, dzino dzakateedzana dzinofanira kugamuchira.
Amazon inogadziridza Alexa nema geolocated maitiro uye zviyeuchidzo, uye email tsigiro
Vakomana vanobva kuAmazon vanoshandisa geolocation pane ese madhijitari ane Alexa kuitira kuti mubatsiri apindirane nenzvimbo yedu.
Netflix yaizogadzira hombe yakawanda yemari yekutenda kuIOS
Nhau dzinodonha kuti Netflix ingadai yakawana 47% yakawanda mumari kuburikidza nekushandisa nharembozha zvichienzaniswa negore rapfuura.
LEGO Yakawedzera Reality Ikozvino Inowanikwa kune iPhone kuburikidza neLEGO Nhandare dzekutamba AR
Ipfupi inovandudzwa nekuwedzera iyo Post kuTumblr chiito uye kugadzirisa akawanda mabugs
Iyo Shortcuts app ichangogamuchira iyo nyowani nyowani inogadzirisa huwandu hukuru hwetsikidzi uye inowedzera iyo Post kune Tumblr chiito
Mwaka 7 unouya kuFortnite ichibvumira iPad Pro 2018 kutamba pa60 fps
Nekusvika kwemwaka wechinomwe, Fortnite yeIOS inototibvumidza kutamba pa7 fps pane iyo Pro Pro, chimwe chinhu chataigona kutoita neiyo iPhone XR, iPhone XS uye iPhone XS Max
Calcbot yeIOS inogadziriswa nekudzoka kuApple Watch
Ivo vakomana veTapbots vanovandudza iyo Calcbot Calculator app kuidzosa kuApple Watch mushure mekuuya kweiyo nyowani Apple Watch Series 4.
Maitiro ekudzima otoplay yemavhidhiyo pane iyo YouTube imba tebhu
Kuregera otomatiki kutamba kwemavhidhiyo paYouTube maitiro akareruka atino tsanangura muchinyorwa chino.
Apple Inozivisa Yakanakisa App uye Akanakisa Mutambo wegore 2018, Uye Zvimwe Zvimwe Hits
Pano tinokuratidzai kuti ndeupi mutambo wakanakisa, iko kushanda kwakanyanya, rwiyo rwakanakisa, emavhidhiyo anotorwa kwazvo ... kubva kuApple panguva ya2018
Apple inodzivirira kutengesa kwe iPhone kubva kuvharirwa muIndia, zvichigonesa kunyorera kunodzivirira foni SPAM
Apple yakadzivirira kutengeswa kwe iPhone kubva kuvharirwa muIndia nekubvumira iyo app kudzivisa manhamba eSAMP kuti atange kuburitswa paApp Store.
Kununurwa kunowedzera rutsigiro rweSiri Mapfupi
Iye zvino tinogona kukumbira Siri, semuenzaniso, kana yedu inotevera yekutumira ichizosvika nekutenda kuDeliver ye iPhone yedu
Socratic ichaita rako repamba pasina kushandisa nguva
Socrate chishandiso chinokutendera iwe kuti uite masvomhu homuweki uye chero rudzi rwemafomula pasina zvinetswa.
Fortnite yeIOS yakagadziridzwa uye inotibvumidza kutamba pa60 fps
Iyo yazvino Fortnite inogadziridza inotipa isu seyakanyanya uye chete ruzivo mukati meiyo ecosystem, mukana wekutamba kusvika makumi matanhatu fps
YouTube Music Premium uye YouTube Premium yatove nehurongwa hwevadzidzi
Google yekushambadzira mimhanzi sevhisi ichangotanga zvirongwa zvitsva zvevadzidzi, zvirongwa zvinopa 50% dhisikaundi
Pluszle, mutambo wekupindwa muropa wauchadzidzira masvomhu epfungwa
Mutambo haufanire kungonakidzwa chete. Pluszle musanganiswa pakati pekupindwa muropa, kunakidzwa uye kusimudzira kwemasvomhu epfungwa, musanganiswa wakakwana.
Kingdom Rush Kutsiva, yakanakisa Dziviriro Dziviriro inodzoka
Imwe yesainzi inozivikanwa kwazvo yekudzivirira sagas inodzoka neiyo nyowani nyowani iyo inochengetedza ese ayo kunaka uye sarudzo nyowani.
CSR Mujaho 2 inotibvumidza kudzoreredza uye kukwikwidzana neyekare mota mushure mekupedzisira kwayo kugadzirisa
Mujaho wemujaho CSR Mujaho 2 uchangobva kuvandudzwa uchiwedzera maviri matsva maficha anoita kuti iyi yekuvandudza ive yakanyanya kukosha kudhara.
Alto's Odyssey inowanikwa ne40% dhisikaundi kutora mukana weChishanu Chishanu
Nhema Chishanu inowanikwawo paApp Store uko kwatinogona kuwana inonakidza Alto's Odyssey mutambo uine 40% dhisikaundi.
Instagram ichaita shanduko kune yemushandisi interface kuti zvive nyore kushandisa
Iyo inofarira kushamwaridzana kwemabhiriyoni evashandisi, Instagram, ichagamuchira shanduko padanho reiyo interface mumavhiki anotevera
Assassin's Creed Kupandukira ikozvino yawanikwa paApp Store
Iyo Assassin's Creed saga yakave yakasarudzika munyika yemitambo yemavhidhiyo, iyo yakagadzirawo ...
Netflix yeIOS inovandudzwa neye mutsva mutambi wenyaya dzayo nemamuvhi
Netflix ichangobva kugadzirisa app yayo yeIOS ichivandudza mutambi kuti iite kuti zvive nyore kunakidzwa nezviri mukati mekabhuku.
Isu tadzoka neBeat the Boss 4, mutambo wevhidhiyo wauchakwanisa kubvisa ruvengo rwese urwo rwunogadzirwa nashe wako, nekudaro kubvisa kushushikana pauri.
Beddit inomira kuenzanisa data kuburikidza neICloud
Iyo Beddit application iyo inoshanda pamwe chete nechishandiso kuongorora kurara, yarega kupa rutsigiro rwekuchengetedza makopi edata mugore.
Cortana yeIOS inovandudza chimiro chayo zvachose
Mushandi weMicrosoft anoshanda, Cortana, weIOS achangobva kugashira kumeso kukuru, achinyatso gadziridza iwo maratidziro uye kuita kuti ive yakajeka.
Castro 3.2 ikozvino yawanikwa nenhau dzinonakidza dzeSideloads
Castro anoenderera mberi nekuvandudza, uye neazvino gadziriso isu tichakwanisa kuwedzera maodhiyo odhiyo zvakananga kubva kuSafari nekungobaya-baya.
Twitter inowedzera zvikamu mukati mekutsvaga sarudzo
Iyo Twitter application yatangisa kupa ruzivo rwekutsvaga basa rakakamurwa muzvikamu.
FiftyThree's Pepa Rokudhirowa App Rakagadziridzwa Kutora Kubatsira kweZvitsva Zvimiro muApple Penzura 2
Makumi mashanu nematatu ePepa Kudhirowa uye manotsi app angori akagadziridzwa kutsigira kaviri-pombi chimiro cheApple Penzura 2
Chombo chinotevera icho Fortnite ichasanganisira chichava husiku hwekuvaka
Chombo chinotevera icho Fortnite ichasanganisira mune yayo inotevera yekuvandudza ichave turret yakaiswa pachigadziko, chombo chakakodzera kutora pasi zvivakwa zvevavengi nekukurumidza.
Iyo Netflix app inovandudzwa kuti ikwane skrini yeiyo nyowani iPad Pro
Iyo Netflix application, iyo inotungamira sevhisi mukutenderera kwevhidhiyo chikamu, ichangobva kuvandudzwa kuti ienderane nesarudzo yeiyo nyowani iPad Pro.
Cloudflare inotangisa yayo 1.1.1.1 app kuita kuti zvive nyore kwazvo kuchinjira kune yako DNS
Vakomana vari kuCloudflare vanoda kuramba vachitikurudzira nezve yavo yakavanzika DNS (1.1.1.1) neapp nyowani inoita kuti zvive nyore kuchinja DNS pane iOS.
Horizon Chase - World Tour, mutambo wazvino uye weRetro panguva imwe chete
Horizon Chase - World Tour, mutambo neazvino kugona uye magirafu anokudza arcade kutyaira kwehupenyu hwese
Mapeji uye GarageBand akagadziridzwa achiwedzera mitsva mabasa
Ese ari maviri ekugadzira mimhanzi, GarageBand, uye iWork suite, yakagadziridzwa kuti iwedzere maficha nyowani pamwe nekugadzikana uye kugadzirisa mashandiro.
iMovie yakagadziridzwa ichibvumira isu kuti tishandise yekunze yekutarisa kuti utarise vhidhiyo
Iyo yazvino iMovie yekuvandudza inotibvumidza isu kubatanidza yedu iPhone kana iPad kune yekunze yekutarisa uye sarudza izvo zvatinoda kuratidzwa pachiratidziri.
Iwo maviri maTwitter makasitoma eIOS, Tweetbot uye Twitterrific akatovandudzwa kuti aenderane nezviratidziro zveiyo nyowani iPad Pro.
Apple's Clips app inovandudzwa ichiwedzera nhamba huru yezvinhu zvitsva
Apple ichangobva kuburitsa nyowani nyowani kune iyo iOS application inonzi Mapepa, ichiwedzera huwandu hukuru hwemabasa matsva, selfie zviitiko, zvitambi ...
Fortnite vanobatana neNFL uye vanowedzera mayunifomu echikwata
Kutanga munaNovember 10, zvipfeko zveNFL mutambi zvichave zviripo muFortnite, kuburikidza nekutenga-mukati-app.
Nike + Mhanya Kirabhu Zvidzoreso Inopa Rutsigiro rweSiri Mazano
Kutenda kune iyo Nike + Run Club kunyorera, uye mushure mekupedzisira kugadzirisa, Siri anozokurudzira nguva yakanakisa yekumhanya
Kingdom Rush Kutsiva, yakanakisa Tower Defense inodzoka munaNovember 22
Mumwe wemitambo yakanakisa muchikamu chayo wadzoka, Kingdom Ruch Kutsiva, inowanikwa munaNovember 22 ye iPhone ne iPad
Blizzard inosimbisa Diablo kuuya kuIOS neDiablo Immortal mutambo
Ivo vakomana veBlizzard vanozivisa kuuya kweanonyanya kuzivikanwa RPG franchise yenguva dzese paIOS: Diablo Immortal.
Boka kufona nemapato anosvika makumi matatu nemaviri kuburikidza neFaceTime inongowanikwa kubva ku iPhone 32s uye iPad Air 6 uye iPad Mini 2.
Iyo Shortcuts application inovandudzwa nekuwedzera zviito zvitsva zvine chekuita nemamiriro ekunze
Nokuburitswa kweIOS 12.1, ivo vakomana kubva kuCupertino vatora mukana uye vakaburitsa nyowani nyowani kune Mapfupi application.
Iyo Outlook tsamba mutengi inovandudzwa kuti ienderane nechiratidziro cheiyo iPhone XS Max uye iPhone XR
Kana iwe uri kutsvaga kunyorera kuti utore maemail ako kubva kuiyo iPhone, Microsoft Outlook ndiyo imwe nzira yakanakisa yaunofanira kufunga nezvayo.
Kuchinja saizi / gadziriso yemifananidzo yedu yaunofarira yekushandisa muzvinyorwa haina kumbobvira yave nyore neCropTop application.
Isu tinoisa iyo HomePod uye iyo Amazon Echo kuyedzo, musoro-kumusoro, kuti ndione kuti ndeupi wevabatsiri vaviri akangwara, Siri kana Alexa.
WhatsApp yatobvumidza iwe kutumira uye kugamuchira maSticker uye isu tinokupa iwe zvese zvese nezve mashandisiro echinhu ichi chitsva pane yedu iPhone.
Ivo vakomana vanobva kuWhatsApp vanosimbisa kusvika kwezvinamirwa kune kunyorera pamwe nemukana wekunamira kubva kune vechitatu-bato vagadziri.
PUBG inogadziriswazve kupemberera Hallowen neyemhando yehusiku, zvombo zvitsva uye mota
Yechokwadi chaizvo Hondo Royale yatinogona kuwana muApp Store, PUBG Mobile, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera Halloween motifs, zvombo zvitsva uye mota.
Fortnite inogadziridza yekupemberera Hallowen inowedzera zombies uye zvombo zvitsva
Mutambo wakabudirira kwazvo paApple App Store, uye zvese pasirese, Fortnite yakagadziridzwa kupemberera Hallowen.
Airline Commander, inonakidza kwazvo mhepo simulator
Airline Commander, yemuchadenga simulation mutambo wevhidhiyo uri munzvimbo dzakakwirira dzeiyo yemahara iOS inorova.
Facebook ichavhura iyo Messenger 4 nyowani nekukurumidza kufamba uye imwe rima modhiyo
Ivo vakomana paFacebook havasi kurega uye vachaburitsa iyo nyowani Messenger 4 ine yakapusa dhizaini uye nyowani yerima modhi.
WhatsApp inovandudzwa neiyo nyowani interface mumamessage uye rutsigiro rweiyo iPhone XS Max
Iyo WhatsApp yekutumira mameseji chikumbiro ichangobva kuvandudzwa kuratidza nyowani interface kana zvasvika pakuratidza sarudzo dziripo dzekudyidzana nemameseji
Tweetbot 5 inosvika iine nyowani icon uye yakasviba modhi nemureza
Iye zvino Tweetbot 5 yasvika neyakavandudzwa icon uye iyo yakasviba modhi seyakanyanya hutsva, zvichave zvakakwana here kuchengetedza ruzhinji kunyangwe rakarasikirwa nemabasa?
Spotify yakagadziridzwa ichiwedzera nyowani maficha evanyoreri
Yazvino yekuvandudza kuSpotify inovandudza zvakanyanya huwandu hwesarudzo dzakabhadharira vanyoreri vepuratifomu kusvika parizvino.
Nyowani Pokémon iri kuuya kuPokémon GO
Chaizvoizvo kubvira pakatangwa mutambo wePokémon GO, wakagadzirwa naNiantic uye iyo Nintendo muridzi wekodzero, ine ...
Iyo Nike + Run Club app ikozvino inowirirana neApple Watch Series 4
Iyo Nike + Run Clu application yakagadzirirwa vamhanyi, ichangobva kuvandudzwa kuti iwirirane neiyo nyowani screen saizi yeApple Watch Series 4
Homwe inovandudzwa uye iri mukutarisira kuverenga zvinyorwa zvatakachengeta
Iyo Read iyo Gare gare, Chikumbiro chePocket chakangovandudzwa nekuwedzera basa rine basa rekuverenga zvinyorwa zvatakachengeta muaccount yedu.
Iyo Sygic GPS navigator inotangisa iyo inogadziridza iyo inobvumidza kushandiswa kwayo neApple CarPlay
Vakomana vanobva kuSygic vanozopedzisira vatangisa kuenderana kweye GPS navigator neApple's CarPlay system kuti tikwanise kuishandisa mumota.
Mifananidzo ye3D inosvika pasocial network Facebook. Shandisa mapikicha ako akatorwa nemifananidzo yemifananidzo kuti uone mafambiro avanofamba pamadziro ako.
Mifananidzo yeGoogle inotibvumidza kuti tigadzire maalbubhu evanhu nezvipfuwo otomatiki
Yazvino gadziriso yeGoogle Mifananidzo yeIOS, inotibvumidza kuti tigadzire maalbubamu nevanhu nezvipfuwo otomatiki pasina kuwedzera matsva matsva atinotora.
Stardew Valley iri kuuya kuApp Store pasina kubhadhara kwakabatana
Vagadziri veiyo yakasarudzika RPG inonzi Stardew Valley vafunga kuvhura yavo vhidhiyo mutambo nemubhadharo mumwe chete uye pasina michero mishoma muApple App.
Apple inogadzirisa nyaya uko kwepamusoro-yakatarwa podcast yaive ichiratidzwa zvisirizvo
Iyo data yeakanyanya kuteerera uye kurodha pasi podcast kubva kuApple's Podcast yakamonyaniswa nekuda kwechimwe chikonzero, ichiratidza data riri kure chaizvo neichoicho.
Evoland, iyo inonakidza RPG ine hutsinye hushoma
Evoland, ino inofambira mberi RPG inoenda kubva kushoma kuenda kune yakashata inogara pamutengo unosetsa unoitisa kuti ive inoda-kutenga.
Pixelmator ikozvino inowirirana neIOS 12
Iyo Pixelmator pikicha, mune yayo vhezheni yeIOS, ichangobva kuvandudzwa kuti inyatso nyatsoenderana neIOS 12
Maitiro ekutumira mavhidhiyo kuburikidza neWhatsApp muGIF fomati
Kushandura vhidhiyo kuGIF fomati kuti uchishandure kuburikidza neWhatsApp maitiro akareruka asingade matatu-bato maapplication
Fortnite mari inosvika madhora mazana matatu emadhora paIOS
Mutambo wemafashoni paIOS uchiri Fortnite sezvinoonekwa nedata remari rakagadzirwa nechishandiso kubva payakatangwa.
Mwedzi mishoma yapfuura Sin Meier Yebudiriro VI yakatangwa yeiyo iPad, zvisinei, ikozvino inotangisa vhezheni yeiyo iPhone uye inoipemberera nezvideredzwa.
Philips Hue mababu ikozvino anotsigira Siri Mapfupi
Philips Hue smart bulbs izvozvi anotsigira Siri Mapfupi mushure meiyo iOS app kugadzirisa.
Inoshamisa 2 inovandudzwa ichiwedzera rutsigiro rweSiri Mapfupi, kuenderana neiyo iPhone XS Max uye Series 4
Iyo yeFantastical 2 kalendari manejimendi app yakangovandudzwa kutora mukana weizvo zvitsva muIOS 12
ACÉRCATE, chirongwa chekutarisira chako
EULEN's new APP ACÉRCATE app inokutendera iwe kutarisira avo vanoida zvakanyanya kubva kune yako smartphone, uchiziva nzvimbo yavo uye nekugamuchira chenjedzo.
Iyo Twitter app inowedzera basa nyowani yekuchengetedza nharembozha
Iyo yepamutemo Twitter application ichangobva kuvandudzwa kuti ivandudze mashandisiro ekushandisa data maererano nekutamba kwevhidhiyo.
Kana iwe uri mushandisi akavimbika weGoogle zvinoshandiswa, pazasi isu tinokuratidza maitiro ekuvhura YouTube zvinongedzo zvakananga muGoogle Chrome
Iwe unogona ikozvino kutumira maGIF neMD pa Instagram
Iye zvino iyo yazvino yekuvandudza yaunza maGIFs kunanga mameseji, kunyangwe aya mameseji asina kungo ziikanwa zvakanyanya.
Opera Kubata inoda kuti iwe usiye Chrome neSafari pane yako iPhone
Opera inotangisa Opera Kubata, bhurawuza nyowani iyo inoda kukwikwidza musoro-ku-musoro neSafari ye iPhone ine mabasa akadai sekufamba-ruoko
Kunyangwe Apple News Kukura, Muparidzi Mari Inosara Zvishoma
Apple nhau yenhau, Apple News, inoramba iri sosi isingakoshese yemari kune vaparidzi vanopa zvinyorwa zvavo.
Vagadziri veIOS izvozvi zvava nezviri nyore kwazvo kugovera mabheji avo
Kugovera iOS app betas ikozvino kwanyanya kuve nyore nekuda kwekugona kwevagadziri kuti vagovane pachena kurodha pasi kurodha pasi
Layton: Iyo Yakavanzika Musha, ikozvino yawanikwa ye iPhone uye iPad
Kana iwe uchida kunakidzwa nemutambo wekutanga weSainton saga pane yako iPhone kana iPad zvakare, unogona kuzviita pakupedzisira.
Apple inozopedzisa kutenga Shazam mushure meOK yeiyo Union
Mushure mekubvumidzwa kwekomisheni yemakwikwi yeEU, Apple inopedzisa kutenga kwekambani yeShazam nechinangwa chekubatanidza tekinoroji yayo yese.
Kupindwa muropa neFortnite, chimwe chezvikonzero zvekurambana zvinoenderana neazvino data
Iko kupindwa muropa uko vamwe vanhu vanotambura kumafashoni vhidhiyo mutambo Fortnite, yatanga kuve kunonakidza mafaro muUnited Kingdom.
Iyo Spark mail mutengi inovandudzwa kuti itore mukana wezvinhu zvitsva zveiyo iOS 12
Iyo Spark email mutengi yakangovandudzwa kuti itore mukana weimwe yezvinhu zvitsva zvinouya kubva kuIOS 12
GarageBand, Apple Support uye TV Remote inogadziridzwa kuti ienderane neIOS 12
Zvitatu zvezvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya nevashandisi veIOS, GarageBando, Apple Tsigiro uye TV Remote ichangobva kuvandudzwa kuve 100% inoenderana neIOS 12.
Google Mepu pakupedzisira inotsigira CarPlay
Mushure memakore akati wandei ekumirira, iyo Google Mepu kunyorera kwave kuwanikwa paCarPlay. Iyo inotevera mepu app yekuita kudaro ichave Waze.
Iyo Teregiramu yekushandisa ichatsiviwa neTeregiramu X, chirongwa chine nani bhatiri kushandiswa uye mashandiro
Mukati memavhiki maviri, sezvakataurwa nemusoro weTeregiramu, Pavel Durovx, Teregiramu X ichatsiva Teregiramu.
1Password yakaiswa vhitamini nekusvika kweIOS 12 kuzvishandiso zvedu
1Password timu yevagadziri yakaburitsa nyowani nyowani yekubatanidza neese nhau dzakaburitswa neApple muIOS 12.
iWork Updates Kuti Utore Kubatsira kweZvitsva muIOS 12
Hofisi yeApple suite yeIOS, iWork, ichangobva kuvandudzwa kuti ipe kuenderana nemitambo mikuru yeIOS 12
Chrome yeIOS inowana yakakura facelift uye nyowani maficha
Google Chrome yeBrowser ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera mitsva uye kugadzirisa zvimwe zvayakatopa.
Mushure memwedzi yakawanda yerunyerekupe, Google yakazivisa zviri pamutemo kuti icharega kupa sevhisi kuburikidza neInbox munaKurume 2019.
iPhone XS uye XS Max: zvese maficha, mutengo uye kuwanikwa
Kana iwe usati uine chokwadi chekuti ndeipi nyowani iPhone modhi inokodzera zvakanyanya zvaunoda, saka tinokuratidza zvese maficha, mutengo uye kuwanikwa kwemhando nyowani dza2018.
Apple inoenderera ichikurudzira kushandiswa kwekunyoreswa pakati pevanogadzira
Ivo vakomana vanobva kuCupertino vakatumira vhidhiyo nyowani pane yekuvandudza portal inoratidza kukosha kwekunyorera kwavo.
Idzi ndidzo nhau huru dzeinotevera yekuvandudza yePUBG Nhare
Kwemwedzi mishoma, isu tinayo muApp Store maapplication maviri akachinja mamiriro emitambo yemavhidhiyo efoni. Iyo inotevera yekuvandudza yePUBG Mobile, uye iyo ichave iripo mangwana zuva rese, ichatipa isu akakosha nhau senge nyowani mepu, mota uye zvombo.
Epic Mitambo inoti iri kushanda kuvandudza kuita kweFortnite pane iOS
Mumwedzi yapfuura, takaona kuti Fortnite iri sei pamiromo yemunhu wese, kusanganisira panhau, zvese kune vakanaka uye neruoko. Fortnite Iyo yazvino Fortnite inogadziridza yeIOS, inopa kudonha kwekuita kwakaburitsa kutsamwa kwevatambi vakawanda.
Apple inoda kuramba ichivandudza Nhau uye inoshandira aimbova Condé Nast Executive
Muna Chivabvu apfuura, takadzokorora runyerekupe rwekuti Apple inogona kutenga Condé Nast, runyerekupe rwakakurumidza kuve Zvisinei nekuwedzera kwenhau kune dzimwe nyika kuri kuenderera mberi kupera simba, iyo Cupertino-based kambani inoramba ichiwedzera zvitsva.
Nyowani WhatsApp yekuvandudza inokutendera kuti utarise mifananidzo muzviziviso
Iyo WhatsApp yekuvandudza inobvumidza iyo sarudzo yekutarisa iyo multimedia mafaera ayo anotumirwa kwatiri kubva kuzivisa
Iyo yakasviba modhi yave, kubvira kuvhurwa kweiyo iPhone X ine OLED skrini, chimwe chezvinhu zvakakosha zvevashandisi vazhinji pakuvhenekera rima paYouTube maitiro akareruka anotibvumidza kuchengetedza yakawanda bhatiri kana tikadaro. Kugara uchishandisa Anwendung ichi.
Twitter inoyedza nyowani mameseji system ine zviitwa zvezviitiko
Twitter inodawo kujoina mameseji kunyorera uye iri kuyedza nyowani interface ine mamiriro ezvemamiriro.
Nintendo inosimbisa kusvika kweiyo RPG nemadhayi ekumabvazuva, Dragalia Yakarasika, kune yedu iDevices yeiyo inotevera Gunyana 27.
Apple ichapa maminitsi makumi matatu emisangano yako pachedu kuitira kuti tikwanise kudzidza kugadzirisa mapikicha edu pane yedu iPhone
Vakomana vanobva kuCupertino vatanga kupa maminetsi makumi matatu-maminitsi muUnited States kuti vadzidze maitiro ekugadzirisa mapikicha pane yedu iPhone.
Munoenda kune Onavo wengano, Facebook inoenda kuburikidza neApple hoop nekubvisa kunyorera
Vakomana vanobva kuFacebook vanosarudza kubvisa yavo Onavo VPN, nekudaro vachiziva kuunganidzwa kwavakaita kwedata redu neapp.
Netflix inoda kumira kubhadhara Apple kune kunyoreswa kune yayo sevhisi kuburikidza neApp Store
Makore mashoma apfuura, vakomana kubva kuCupertino vakazivisa shanduko mumhando yekunyorera, modhi iyo, kutanga mugore rechipiri, yakadzora huwandu hweiyo hofori hofori yakatanga kumira kurega kubvumira vashandisi kunyoresa kuNetflix kuburikidza neApp ye iOS.
1Password inosangana nekiyi yekuzvizadza muIOS 12
1Password ichabatana zvisina mushe nesystem senge yeIOS 12 uye isu tinokwanisa kuzadza auto-kuzadza mazita edu evashandisi uye mapassword zviri nyore.
Gadzirira kudzokera kukirasi neakanakisa mafomu eApple, iPad neMac [SWEEPSTAKES]
Isu tinounganidza akanakisa ekugadzira ekunyorera iwe aunogona kuwana kugadzirira yako iPhone nePadad yekudzokera kukirasi.
Spotify inowedzera iyo BBC Podcast raibhurari kune yayo katarogu
Kutevera kusvika kweDeutsche Grammophon paApple Music, Spotify inopemberera kusvika kweiyo yose BBC podcast katalog kune yayo Podcast yekupa.
Ita iyo Camino de Santiago ne iPhone yako uye Wikiloc
Wikiloc chishandiso chinopa nzira dzekunakirwa nemasikirwo uye chakanakira kukuperekedza paCamino de Santiago
Kana iwe uri mumwe wevaya vasingabhadhari Spotify iwe unogona kusvetuka zvinotsamwisa kushambadzira pasina zviyero
Spotify inoronga shanduko huru mune yayo yemahara modhi ichibvumira mushandisi kusvetuka ma ads anotambwa pakati pezviridzwa.
Chenjerera! WhatsApp meseji dzinogona kugadziriswa mukati mekukurukurirana
Imwe kambani yekuIsrael yekuchengetedzwa kwekuchengetedza ingadai yakawana bhagi rinotibvumidza kuti tishandure meseji dzeWhatsApp mune chero boka ratinaro
Pfuti ine mabara maviri, ikozvino yave kuwanikwa mune yazvino Fortnite kugadzirisa
Fortnite uye PUBG ndiyo yave mitambo yakapa hurukuro yakawanda kusvika parizvino gore, sezvo ichitipa chiitiko chitsva kuMutambo wemafashoni pamapuratifomu ese, Fortnite, achangobva kugashira nyowani nyowani yekuwedzera zvombo zvitsva uye nekuvandudza kupfura kutonga.
Gmail yeIOS ichatibvumira kudzikamisa kuunganidzwa kwemaemail mukukurukurirana
Sezvo makore apfuura, huwandu hwesarudzo dzakapihwa neakasiyana emaimeri masevhisi uye maapplication ekugadzirisa edu matsamba, iyo yeGmail tsamba mutengi yeiyo iOS ichatibvumidza mukati memazuva mashoma kudzima kuunganidzwa kwemaemail nekutaurirana, pamwe nekupfuura iyo desktop vhezheni.
Negadziriro yeparutivi wako akangwara 'Kumba' kumisikidza pamwe neMutongi weKumbaKit app
Wakaneta nekutambisa nguva kudzoreredza HomeKit marongero? Mutongi weKeKeKit anounza kwatiri ma-backups akamirirwa kwenguva refu kuti tirege kurasikirwa nechinhu.
Pokémon GO inogadzirira kuwedzera iyo yakamirirwa kwenguva refu hondo pakati pevatambi
Ivo vakomana veNiantic vanogona kutiunzira iyo inotarisirwa kwazvo Pokémon GO yekurwa modhi inogona kusvika pakupera kwegore kuzomutsidzira kurodha pasi kwemutambo.
PUBG inowedzera rutsigiro rwevatongi vemitambo mune yayo yazvino kugadzirisa
Ivo vakomana vePUBG vanogadziridza yavo app yeIOS vachiwedzera rutsigiro rweiyo klassiki vhidhiyo mutambo wevatariri venhare mbozha.
Plex yeIOS inogadziridzwa nekuwedzera nhau dzinoenderana nepodcast
Vakomana vepaPlex vanowedzera mukana wepodcast kurodha pasi kune yavo app yeIOS, kuti tikwanise kurodha pasi edu epodcast uye toteerera kwavari pasina network.
Moto Emblem Magamba akagadzira anopfuura $ 400 miriyoni yeNintendo pane nhare mbozha
Mutambo wekutanga kubva kukambani yekuJapan yeNintendo pamapuratifomu epamba yaive Mario Run, mutambo usina kuburitsa tarisiro yakatanga kugadzirwa.Nintendo kubudirira kukuru kubva payakasvika pamapuratifomu efoni kunoenderera kuve uye uye kuchave Moto Emblem Magamba kwenguva refu.
Mhoro Muvakidzani mutambo wekunyepedzera uye unotyisa uyo unokuvaraidza
Mhoro Muvakidzani chiitiko chinoita kuti tirambe tichinetsana, tinofanirwa kupinda mumba memuvakidzani tisinga zivikanwe.
Dropbox Pepa rakagadziridzwa kuvandudza maitiro aro
Iyo nyowani yeDropbox Pepa inogadziridza inowedzera maitiro ekugadzirisa kuAdobe Illustrator PDF uye ongorora mafaera.
Google Mepu inotitaurira kuti ndeapi maresitorendi akanakisa zvinoenderana nezvatinoda
Zhizha, uye kunyanya patinenge tiri pazororo, kazhinji inguva yegore apo patinoshandisa zvese Apple Mepu neGoogle Mepu zvakanyanya, kunyangwe pazvinoitika patsva zveGoogle Mepu, zvichatibvumidza kuti tikurumidze kuziva kuti ndedzipi nzvimbo dzakanakisa dzekudyira mu nzvimbo inoenderana nezvatinoda.
Asphalt 9: Ngano, izvozvi zvave kuwanikwa paApp Store
Saga yeAsphalt yave imwe yeanonyanya kufarirwa atinogona kuwana nhasi kumafoni nhare. Kunyange ichiri chokwadi kuti haisi Asphalt 9: Ngano, Gameloft's inozivikanwa mota yekumhanyisa saga, yave kuwanikwa kurodha mahara.
Apple inodhinda vhidhiyo nyowani inoratidza simba reiyo iPhone X
Kana paine isingasviki mwedzi miviri kuti isu tione chizvarwa chinotevera cheiyo iPhone, vakomana vanobva kuCupertino, vatangisa michina Apple inotipa chiziviso chitsva kwatinogona kuona simba rinopihwa neA11 Bionic processor
Iyo Apple Store app inovandudzwa neitsva yekutsvaga interface
Mumakore achangopfuura, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakaedza kushandura nzira iyo vashandisi vanobatana nekambani, kunyanya iyo Apple Chitoro application, ichangobva kugamuchira gadziriso nyowani iyo iyo system yakavandudzwa. .
Google Street View ikozvino inowirirana neiyo iPhone X skrini
Google ichangobva kuburitsa nyowani nyowani kuGoogle Street View application, iyo yekupedzisira iyo inoita kuti iwirirane nechiratidziro cheiyo yekupedzisira Google application iyo yakagadziridzwa kuti iwirirane nechiratidziro cheiyo iPhone X ndeyeGoogle Street View
Netflix inowedzera zvinopfuura zana mapikicha emafaira ekuti isu tigadzirise kunyorera kwedu
Iwe pamwe watoona kare, Netflix ichangobva kugadzirisa mifananidzo yemaphrofayili atinogadzira nekuwedzera isingagumi nhamba yevatambi vane mukurumbira.
Hondo modhi yave kuwanikwa mune yazvino PUBG Nhare yekuvandudza
Kunyangwe munhu wese achitaura nezve Fortnite, isu vedu vane makore mashoma, izvo zvekuvaka pavanotanga kupfura kutichengetedza, senge Iyo Inotarisirwa Hondo Mode, inowanikwa kuburikidza neazvino PUBG Nhare yekuvandudza
Iwo akanakisa ekugadzirisa mapikicha mapurogiramu enguva yacho
Isu tinokuratidza matatu matatu akasimba ekugadzirisa mafoto eiyo nguva muApp Store: Pixelmator, Darkroom uye Enlight.
Sygic inoratidza kushanda kweayo app muApple CarPlay
Sygic yeCarPlay ndeyechokwadi, ivo vakomana kubva kune yakakurumbira bhurawuza vanotitaridza muvhidhiyo mabrowser avo achashanda sei muCarPlay yedu.
Augmented Reality inouya kuAmazon app kutibatsira nezvinhu zvidiki
Amazon inosanganisira Yekuwedzera Reality kuitisa mukushandisa iyo ichatibvumidza isu kuona uye kutenga zvidiki zvidiki senge screws
Iyo Banco Santander application, iko kunyorera kune zvakawanda kugadzirisa uye zvinoita kunge kuri kuteerera kune izvo zvinodiwa nevatengi, isu tinokuudza iwe nhau.
Monument Valley 2, chikamu chakamirirwa kwenguva refu chakasiya zvakawanda kudiwa
Chikamu chechipiri cheMonument Valley 2 chinorova iyo App Store. Inoenderera ichidonha asi ichitadza kugonesa vashandisi zvakanyanya sekutanga chikamu.
360-degree mavhidhiyo izvozvi zvinoenderana neiyo VLC app
Iyo nyowani yeVLC yekugadzirisa inogadzirisa akawanda matambudziko uye inoita kuti ienderane ne360-degree mavhidhiyo uye Google Chromecast.
Apple inobvisa Doorbell chikamu kubva kuKeKK accessories accessories
Ivo vakomana veCupertino vanosarudza kudzoka shure nekubvisa Ronioni chikamu kubva pane chinyorwa cheKiKit-inoenderana zvishandiso.
App Store Batanidza uye TestFlight inogadziridzwa pamwe nekuvandudza uye nemabasa matsva
Apple inogadzira akasiyana maficha kuwanikwa kune vanogadzira kuitira kuti vakwanise kuita, kwete kungoteedzera maapplication avanayo Iwo App Store Unganidzo uye TestFlight application vakagamuchira akasiyana siyana ekuwedzeredza kuwedzera huwandu hweshumiro yavanopa kune vanogadzira
Mari inowanikwa kubva kuApp Store inoverengeka inogadzirwa neGoogle Play Store
Zvishandiso zvekushandisa zvazove zvakanyanya, uye dzimwe nguva ndiyo chete nzira yekuisa mashandisiro pane inoshanda system. App App Mari inowanikwa neApple application chitoro yakapetwa kaviri inogadzirwa neGoogle Play Store mukati memwedzi mitanhatu yekutanga ya6
Instapaper, inova yakazvimirira uye haisisiri chikamu chePinterest
Mumakore achangopfuura, Instapaper yave, pamwe nePocket, iwo maviri makuru masevhisi ekuchengetedza maclink uye nekudaro kukwanisa kuaverenga kunze kwenyika.Iyo yekuverenga-iyo-yekupedzisira sevhisi Instapaper, yarega kuve chikamu chePinterest uye mukati memazuva makumi maviri nerimwe, icha tanga kushanda wakazvimiririra, sekumavambo ayo.
Amerigo, iko kunyorera kurodha chero mhando yezvinyorwa pane iyo iPhone nePad, inovandudza chimiro chayo uye inowedzera mabasa matsva
Iyo Amerigo application, imwe yeakanakisa kurodha maneja eiyo iPhone nePad, yakagadzirisa zvachose chimiro chayo uye yakawedzera inonakidza mabasa.
Firefox Focus inovandudzwa nekuwedzera mabasa anodikanwa nevashandisi
Iyo yazvino yekuvandudza kune iyo Mozilla Foundation yekuvanzika-yakatarisana browser, Firefox Focus, inotibvumidza kutsvaga mawebhusaiti atinoshanyira
Aya ndiwo mapurogiramu anozivikanwa kwazvo mumakore gumi eApp Store
Facebook Messenger, Minecraft, uye WhatsApp pamusoro peiyo runyorwa rweanonyanya kufarirwa maapplication paApp Store pane yavo yegumi yegumi.
Chirp yeApple Watch inowedzera zvitsva zvakadai sekutamba kweGIFs
MaGIF pakati pezvimwe zvinhu zvitsva haakwanise kushayikwa muChirp, chimwe cheakanakisa mafomu ekugona kushandisa Twitter pane yedu Apple Watch.
Fortnite's Playground inonyangarika muna Chikunguru 12, asi ichadzoka
Musi waChikunguru 12, iyo Nhandare yemitambo inonyangarika, zvakare, kubva kuFortnite, asi inodzoka iine dzimwe sarudzo nemabasa matsva munguva pfupi.
Newton inovandudzwa nenhau uye inonongedzera kukuwedzera kwemutengo
Newton ane nhau nyowani, ari kuzowedzera chinhu chitsva chinonzi Recap uyezve anotora mukana wekukwidza mutengo wezviwanikwa.
Google inogadziridza iyo Inbox application kuti ienderane neiyo iPhone X
Iyo yakamirirwa-refu yekudzoserwa kuInbox app yeiyo iPhone X yave kuwanikwa paApp Store.
Sygic inosimbisa kusvika kwayo kuCarPlay neIOS 12
Iyo GPS yekushandisa app, Sygic, inoenderera ichiratidza mashandiro ayo neiyo nyowani Apple CarPlay uye iOS 12.
Teregiramu inoenderana neIOS 12 uye inowedzera nyowani maficha mune yayo yazvino kugadzirisa
Teregiramu, iko kunyorera mameseji neRussia mavambo kwakagadziridzwa uye iko zvino kuri kuenderana zvizere neIOS 12 pamwe nekuwedzera maficha.
Iwe unogovana account yeNetflix neshamwari? Netflix inoda kukwidza mutengo weiyo 'Premium' chikamu
Tichifunga nezve kugamuchirwa kukuru kwezvirongwa zvemitengo yemidziyo mizhinji, Netflix ikozvino inoda kuwedzera muchirongwa icho chinobvumidza kusvika kumidziyo mina.
Iyo Nhandare muFortnite inowanikwa zvakare
Iyo nyowani Fortnite modhi, Nhandare yekutamba, yave kuwanikwa zvekare mushure mekunge yanyangarika kubvira payakatangwa
GarageBand yakagadziridzwa uye ikozvino inotsigira Classwork (Chikoro Chechikoro)
Chazvino chishandiso chakagadziridzwa kutsigira Chikoro Chikoro cheApple GarageBand.
Dr. Panda: Purazi, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wakasununguka uyo watinokuratidza nhasi ndiDr Panda: Farm, mutambo wekuti vadiki vave varimi.
LinkedIn inoshandura chimiro chedu kuita kadhi rebhizinesi redhijitari
Iyo yazvino yekuvandudza yeiyo LinkedIn application, inotibvumidza isu kugovana yedu data kuburikidza neQR kodhi iyo iko iko iko application iko kuverenga
Apple ichavaka mamapu ayo kubva pakutanga
Apple yanga ichivandudza mepu dzayo kwemakore, asi ikozvino yasarudza kuivaka kubva pakutanga pamwe neruzivo rwese rutsva rwavakawana mumakore apfuura.
Alto's Odyssey iri kutengeswa kwenguva shoma
Alto's Odyssey inowanikwa paStor Econ App yeinonakidza 60% dhisikaundi pamutengo wayo wepakutanga, asi ichagara kwenguva pfupi.
Iyo nyowani kugadziriswazve kweTunes Remote ikozvino yave kuwanikwa paApp Store
Apple yakagadziridza iyo iTunes Remote app iyo iko kutamba kweiri iTunes raibhurari kunodzorwa, kuchinjisa iyo kune iPhone X.
Instagram inopa zvitambi zvemimhanzi kuti isu tiwedzere kune edu Nhau
Iye zvino tinogona kuwedzera mimhanzi kuedu Instagram Nyaya nekuuya kwematikita emimhanzi matsva ayo Instagram achangotanga.
Fortnite inowedzera imwe nyowani mamiriro inokupa iwe awa rekudzidzira usingafe
Iye zvino Fortnite yeIOS yawedzera maitiro ekudzidzira ayo anozokutendera iwe kuti udzidze kutamba usingafe zvinouraya.
Teregiramu inovandudzwa uye inotibvumidza kutara mameseji eboka sekuverengwa
Iyo yazvino Teregiramu yekuvandudza inotibvumidza isu kuti tikurumidze kutara mameseji asina kuverengwa zvakananga kubva kuimba yekutaura, tisinga pindire zvemukati
Pokémon Kutsvaga inosvika zviri pamutemo paPad uye iPhone
Pamutemo Pokémon Quest yakaburitswa ye iPhone nePadad, nguva yekuvavhima vese zvakare.
Playz, iyo app nyowani yekuwana zvese zvirimo papuratifomu
Playz ndiyo app nyowani yekugona kunakidzwa nezviri mukati mepuratifomu kubva ku iPhone yako nePadad chero kupi
Yekushambadzira shambadziro, Microsoft Edge yeIOS inogadziridzwa nekuwedzera Adblock Plus
Vakomana veMicrosoft vanowedzera zvinonakidza Adblocker Plus kuMicrosoft Edge yeIOS kuitira kuti tikanganwe nezveshambadziro paInternet.
Estonia neRoma vagara vanonakidzwa neruzhinji rwekufambisa ruzivo rwunopihwa neApple Mepu
Estonia neRome vanobatana nepfupi runyorwa rwenyika iyo inopa ruzivo nezve ruzhinji rwekufambisa kuburikidza neApple Mepu
Fallout Shelter anovandudza Bethesda akamhan'arira Warner Bross yemutambo weWestworld, achiti ikopi yakajeka yeFallout Shelter
Vakomana kuAmazon vanozopedzisira vatanga kuburitsa yavo katarogu yezvinhu zvevana, Amazon FreeTime Unlimited, paIOS kuwana kubva kune chero iDevice.
Keepsafe Browser, iyo nyowani bhurawuza iyo inotibvumidza isu kuti titarise paInternet tisingaite
Iyo bhurawuza nyowani ichangomhara paIOS inonzi Keepsafe uye inotibvumidza kuti titarise tisina kusiya trace pamwe nekuvharidzira kushambadza uye trackers
Yahoo! Mail inotangisa webhu vhezheni yemafoni nhare
Kutenda kune itsva webhu vhezheni yeYahoo Mail, hazvidiwe kuti Yahoo Mail application iwanikwe muApp Store yakaiswa kuti utarise tsamba dzedu
Munyori weIA anovandudzwa kuti ave zvizere muchiSpanish
Iyo inoshamisa iA Munyori kunyorera kwave kungovandudzwa kuwedzera husiku maitiro uye izere Spanish dudziro yeiyo yakazara interface
IGTV, uku kubheja kwe Instagram kuti umire paYouTube asi zvakatwasuka
IGTV izano reFacebook re Instagram kuti rive imwe nzira yeYouTube, zvirizvo zvinotarisirwa nekambani.
Adobe Scan inotibvumidza kushandura makadhi ebhizinesi atino fotota kuva mafoni
Nekuda kweiyo Adobe application nyowani, Adobe Scan, tinogona kukurumidza kushandura makadhi ebhizinesi evatengi vedu kuva mafoni pane yedu iPhone
TuLotero chishandiso chakanakisa kuridza rotari
Kutenda kuchirongwa cheTuLotero, tinogona kubheja maEuromillions, Primitiva, Bonoloto, Quiniela uye rotari yeKisimusi kubva ku iPhone yedu
Pokémon GO inobvumira kuendesa zvisikwa pakati pevatambi
Niantic yakasimbisa kuti ichabvumidza kuchinjaniswa kwepokémon pakati pevatambi mumutambo wayo wePokémon GO kuburikidza neyekuvandudza iyo yakaburitswa.
HBO inogadzirira kuvhura yepamutemo Westworld mutambo weIOS
HBO inoshamisika nekutanga mutambo wepamutemo weWestworld weIOS, mutambo watichatora kutonga nekutungamira kwepaki inozivikanwa yeWestworld.
PUBG inovandudzwa nekuwedzera munhu-wekutanga maonero kuwedzera kune akawanda maficha maficha
Pubg Mobile vhezheni 6.0 inotipa iyo hombe nhamba yezvinhu zvitsva, pakati pazvo zvatinogona kuratidza yekutanga munhu mode, iyo arcade modhi muMiramar ...
Instagram inosiya iyo zano rekuzivisa vashandisi vema skrini akagadzirwa nevateveri vavo
Sekureva kweBuzzFeed, iyo yekudyidzana network yeFacebook, Instagram, haizoite sarudzo yekuzivisa vashandisi kuti mifananidzo yavo yakatorwa.
Areka: Kupona Kuchinja kunouya kune iyo iOS App Store semahara kutamba
Dhirivhari yakamirirwa inosvika paApp Store, Areka: Survival Evolve inounzwa mu "mahara" maitiro.
Yazvino yekuvandudza kuShazam inovandudza mubvunzo wenziyo dzawaona
Yazvino kuvandudzwa kweShazam inotibvumidza isu kuwana runyorwa rwe nziyo dzinozivikanwa nechishandiso nenzira yakapusa pamwe nekuwedzera mabasa matsva.
Iyo Apple Tsigiro application inovandudzwa ichiwedzera rutsigiro mune dzimwe nyika nemitauro mitsva
Iyo Apple Tsigiro yekushandisa ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera mitauro mitsva uye mashandiro mune makumi maviri nyika nyowani uko isiri kuwanikwa kusvika parizvino.
Microsoft inoshamisika uye ichavhura iyo inoshamisa Gears yeHondo ye iPhone
Ivo vakomana vanobva kuMicrosoft vanoshamisika paE3 nekuburitsa maGiya ehondo emafoni nhare anotambirwa nenhamba dzePOP, maGiya POP!
Maitiro ekugadzirisa maazisi e iPhone ne iOS 12
Kugadzirisa matsva eIOS 12 Notices inzira yakapusa uye zvinongotora masekondi mashoma enguva yedu yakakosha.
Apple inowedzera airport uye nzvimbo yekutenga ruzivo mukati meApple Mepu
Iyo Cupertino-yakavakirwa kambani ichangobva kuwedzera huwandu hwenhandare uye nzvimbo dzekutenga kwainopa ruzivo nezve zvemukati mayo.
1Password ichasanganisirwa muzvimisikidzo uye yechitatu-bato maapplication muIOS 12
iOS 12 inosanganisira zvigadzirwa zvekuchengetedza senge mukana wekubatanidza izvo zvinoshandiswa muIOS autocomplete kana yechitatu-bato kunyorera. 1Password, chishandiso chekuchengetedza makiyi edu, yakasimbisa kubatanidzwa kwayo kuzere muIOS 12.
Shanduro dzekuyedza dzinosvika kune ese mashandiro eApp Store
Apple inogadziridza gwara rekushandisa kweApp Store ichibvumira vese vanogadzira kuti vape nguva dzekuyedza dzezvishandiso zvavo kuti tikwanise kuvaedza pasina zvimhingamupinyi tisati taenda kunotora.
ARKit 2 ichatibvumidza kutamba neshamwari dzedu tichishandisa Kuwedzera Kwechokwadi
Apple inosvitsa kugona kwevagadziri kuwedzera vatambi vakawanda kune Augmented Reality mitambo muIOS 12 uye ARKit 2.
HomeScan inokubatsira iwe kutarisa huwandu hwemidziyo yako yeKeKKit
HomeScan chishandiso chakakosha kuti uzive kana yako HomeKit zvishandiso zvinosvika neinodiwa chiratidzo kune inodzora unit kuitira kuti zvese zvishande nemazvo.
Firefox inotibvumidza kurodha chero mhando yezviri mukati uye kuigovana nemamwe maapplication, mushure mekupedzisira kugadzirisa
Iyo yazvino Firefox yekudzoresa pakupedzisira inotibvumidza kurodha chero mhando yezvinyorwa kubva paInternet kuenda kune yedu kifaa uye wozoivhura neapplication yatiri kuda
WhatsApp inogadzirira kuvhura yavo yezvemari yekutengesa sevhisi munzira yeApple Pay Cash
Nechinangwa chekuwedzera Apple Kubhadhara Cash, vakomana vari paWhatsApp vari kugadzirira kuvhura yavo yemari kutengeserana sevhisi pakati pevashandisi vavo.
Pokémon Kutsvaga, ndiyo nyowani mutambo weNintendo wakafuridzirwa nenyika yePokémon
Mumwedzi wese waChikumi, Nintendo ichavhura Pokémon Kutsvaga mutambo weIOS, mutambo mutsva umo Pokémon yedu inoenda kuchitsuwa kwavanofanira kugadzira musasa vachirwisana nevamwe vorudzi rwavo.
Matatu anogumbura ayo iOS 11.4 akagadzirisa
Pamwe nekusunungurwa kweIOS 11.4 uye nhau huru dzayakatipa, isu tinowanawo mamwe emabhugi asina musoro akaonekwa muIOS akagadziriswa.
Fortnite inogadziridzwa nezwi kutaura uye nekumwe kuvandudzwa mushanduro 4.3
Mushure memazuva mashoma asina kugadzikana umo mhosva yakatemerwa naPUBG Corp. yekutyora kodzero, izvozvi ...
Doppler yakagadziridzwa uye hapachina basa kushandisa iTunes
Doppler yakagadziridzwa pamwe nekuvandudza kukuru. Uyu mutambi uye maneja wemaraibhurari yedu yemumhanzi haachadi iTunes kuendesa matraki kuiyo iPhone
Russia inopa Apple mwedzi mumwechete kuti ipindure chikumbiro chekubvisa Teregiramu kubva kuApp Store
Mutumbi weRussia unoona nezvekufambiswa kwemashoko muRussia, wakumbira zvakare Apple kuti ibvise iyo Teregiramu yekushandisa kubva kuApp Store, ichipa mwedzi mumwe chete kuti ipindure.
Zvinhu 3 zvinodzokerazve pachazvo uye zvinotangisa kugadzirisa nenhau dzakakosha kwazvo
Vazhinji vashandisi vanojekesa kunyorera kuti vawedzere kugona kwavo uye kugadzirwa kwezuva nezuva. Icho chinhu chakakosha chehupenyu hwezuva nezuva: kurongeka ...
Phil Schiller naValve vachashanda kuunza Steam Link kuApp Store
Chekupedzisira, Apple yaifanirwa kunge ichibatanidzwa mumatambudziko anokonzerwa nekusabvumidzwa kweiyo Steam Link kunyorera yeIOS, ari Phil Schiller uyo achange achitarisira kugadzirisa dambudziko neValve.
Maitiro ekuona iyo Champions League yekupedzisira (Real Madrid vs Liverpool) yemahara kubva kune yako iPhone
Isu tinokuudza maitiro ekuona mafainari eEFAFA Champions League pakati peReal Madrid neLiverpool. Final ichatambwa neMugovera Chivabvu 26 na20: 45 dzemasikati.
Vevo ichabvisa mashandisiro ayo kubva kuApp Store uye webhu saiti inomira kushanda
Vevo, vhidhiyo yemumhanzi chikuva, yazivisa kuti ichabvisa mashandisiro ayo kubva kune ese aripo mashopu ekushandisa uye kuti webhu inomirawo kuratidza zvirimo.
Steam Link app inorambwa neApple panguva yekuongorora
Kunyangwe hazvo yakatanga kubvumidzwa neApple timu, manejimendi wekupedzisira weSteam Link app yeIOS yakawana kuramba kweApple yekupa kupokana kwekutengeserana.
Patent inoratidza kuvandudzwa kunokwanisika kusarudzo ye "Usakanganise uchityaira"
Pasina kupokana inyaya yehana yeumwe neumwe kusiya iPhone mune yegorovhosi mukamuri uchityaira uye ...
Bhugi muWhatsApp inobvumira vatinoshamwaridzana navo kuramba vachinetsa. Isu tinokuratidza mhinduro yechinguvana
Iyo WhatsApp yekutumira mameseji application ine bhagi pane maseva ayo ayo anotadzisa iyo application kubva mukugona kunyatso kuvharira meseji kubva kune akavharidzirwa vokukurukura uye kubva mukukwanisa kuona yedu nhoroondo uye yekupedzisira yekubatanidza nguva.
Instapaper inozivisa kuti icharega kupa sevhisi muEurope kubva nhasi nekuda kweiyo GDPR
Iyo yekubatanidza yekuchengetedza sevhisi, Instapaper, achangobva kuzivisa kuti kubva nhasi, zuva iro iro idzva RGPD rinotanga kushanda, richamira kupa masevhisi ayo muEurope.
Apple inotendeukira kuWorld Cup nekuwedzera mifanikiso kuApple clip
Semazuva ese muzviitiko zvepamusoro-soro, Apple inogadziridza Apple clip nekuwedzera mifananidzo yeiyo 2018 World Cup muRussia.
Castro akagadziridzwa kuita shanduro 3 uye anounza Castro Plus
Castro, mumwe wevatambi vepodcast vakanakisa, akagadziridzwa mushanduro 3 uye nayo inounza Castro Plus, chirongwa cheApple Watch nezvimwe zvakawanda.
Evernote inobvumidza kushandisa AirPods kunyora izwi kumutumira mune yayo yazvino kugadzirisa
Iyo Evernote iOS app yakagadziridzwa nezvitsva maficha uye zvinowedzeredzwa. Chinonyanya kukosha ndechekuti ikozvino unogona kushandisa yako AirPods kuwedzera manotsi kuburikidza nezwi rako
PUBG Mobile inosvika gumi nemamirioni vashandisi vanoshanda
PUBG yave imwe yemitambo yakanyanya kurodha munhoroondo uye yatove nemamirioni gumi ezuva nezuva vanoshandisa vanoshanda.
Iyo inogadziriswa HUD inosvika mune nyowani nyowani yeFortnite yeIOS
Kutevera zvikumbiro zvevashandisi, vakomana vanobva kuEpic Games vanowedzera kugona kuita iyo Fortnite HUD mune itsva vhezheni yeFortnite yeIOS.
Dziva raDr Panda, yemahara kwenguva yakati rebei
Kutanga nhasi uye kwenguva yakati rebei, tinogona kurodha mahara mutambo waDr Panda Padziva, chishandiso icho vana vadiki vanofanirwa kuchengeta mhuka shanu pavanonakidzwa nedziva nezvose zvarinosanganisira.